नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको असोज २६ देखि हकप्रद खुल्दै, कुन ठाउँबाट फारम भर्ने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको असोज २६ देखि हकप्रद खुल्दै, कुन ठाउँबाट फारम भर्ने ?
काठमाडौं - नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकले असोज २६ गतेदेखि १२०% हकप्रद सेयर बिक्री खुला गर्ने भएको छ । बैंकले १ः१.२ अनुपातमा १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको २६ लाख ४३ हजार ५३८.८० कित्ता बिक्री गर्न लागेको हो । यो हकप्रद सेयर काक्तिक २९ गतेसम्म भर्न पाइनेछ । यस हकप्रदमा एनआइबीएल क्यापिटल मार्केट्सले बिक्री प्रबन्धकको काम गर्नेछ । असोज १७ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्र यसमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
एनआइबीएल क्यापिटल मार्केट्स काठमाडौं तथा नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको बुटवल, ८ रुपन्देही तथा यसका अधिकांश शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । त्यसैगरी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चिप्लेढुंगा पोखरा, विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, नारायणगढ तथा धनगढी शाखाबाट पनि हकप्रद सेयर भर्न सकिनेछ । हाल नेपाल कम्यूनिटीको चुक्ता पुँजी २२ करोड २ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । हकप्रद बिक्रीपछि भने बैंकको चुक्ता पुँजी ४८ करोड ४६ लाख ४८ हजार ७८० रुपैयाँ पुग्नेछ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा बैंकले ३ करोड ६१ लाख ९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १६ रुपैयाँ ३९ पैसा (बार्षिक) र प्रतिसेयर नेटवर्थ १२७ रुपैयाँ ०९ पैसा रहेको छ ।